फर्निचर उद्योगमा आगलागी हुदा सवा करोड बराबरको क्षति » खबरहरुको एउटै केन्द्र
फर्निचर उद्योगमा आगलागी हुदा सवा करोड बराबरको क्षति
आईतवार, चैत्र २७, २०७३ ०८:३७ मा प्रकाशित !
२७ चैत​, झापा । भद्रपुर – ८ मङ्गलचोकका देवेन्द्र बस्नेतको चन्द्राफर्निचर उद्योगमा आइतबार बिहान आगलागी भएको छ । बिहान २ः४८ बजे करेन्ट चुहिँदा खाना पकाउने ज्ञासको सिलिन्डर पड्किएर आगलागी भएको वडा प्रहरी कार्यालय भद्रपुरले जनाएको छ । आगलागीबाट उद्योगमा रहेका यान्त्रिक औजार, तयारी फर्निचर, घरायसी सामान, लत्तापकडालगायत जलेर नष्ट भएको छ ।
आगलागी नियन्त्रणका लागि बिर्तामोड नगरपालिका र भद्रपुर नगरपालिकाका वारुणयन्त्र परिचालन गरिएको थियो । स्थानीयवासी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरीलगायतको सक्रियतामा बिहान ६ः५० बजे आगो नियन्त्रणमा लीएको प्रहरीले जनाएको छ ।
पीडित बस्नतेले आफू कामको सिलसिलामा इलामको पशुपतिनगर गएका बेला आगलागी भएको बताउँदै भने, “म घरमा थीन, भर्खरै आइपुगेँ, सबै जलेछ, मेरो बिजोग भयो ।” सोही स्थानका प्रत्यक्षदर्शी राजबाबु शङ्करका अनुसार ठूला आवाजमा ज्ञास सिलिन्डर पड्किएपछि आगो फैलिएको थियो ।
PREVIOUS POST Previous post: सहिदको सपना अझै पनि पूरा भएको छैन – महासचिव पोखरेल
NEXT POST Next post: सवारी दुर्घटनामा १ को मृत्यु
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते आईतवार, चैत्र २७, २०७३ ०८:३७
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस आईतवार, चैत्र २७, २०७३ ०८:३७
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण आईतवार, चैत्र २७, २०७३ ०८:३७
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी आईतवार, चैत्र २७, २०७३ ०८:३७
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? आईतवार, चैत्र २७, २०७३ ०८:३७